किन लाग्यो प्रहरीमा जागिर छाड्नेको लर्को ? खुल्यो यस्तो रहस्य -
किन लाग्यो प्रहरीमा जागिर छाड्नेको लर्को ? खुल्यो यस्तो रहस्य
जागिर छाड्नेमा सबैभन्दा बढी हवल्दार र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई), नायब निरीक्षक (सई) र जवान छन्। प्रहरी मुख्यालयका अनुसार गत साउनदेखि हालसम्म दुई डीआईजी (नायब महानिरीक्षक) एक डीएसपी (नायव उपरीक्षक) दुई इन्स्पेक्टर (निरीक्षक), ३९ सई, ९२ असई, चार सय ६४ हवल्दार, ९३ जवान र १४ कार्यालय सहायकले जागिर छाडेका छन्।आगामी असारसम्म यो संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ। गतवर्ष प्रहरी उपरीक्षकदेखि सहायकसम्म नौ सय ८८ जनाले विभिन्न बहानामा जागिर छाडेका थिए। यीमध्ये केहीले पेन्सन पाइसकेक, केहीले अमेरिकाको डीभीचिठ्ठा परेर त केहीले विदेशमा राम्रो काम पाएका कारण जागिर छाडेका छन्।
केहीले भने घरायसी कारण देखाएका छन्। यसमध्ये डीआईजी नवराज सिलवालले प्रहरी महानिरीक्षक(आईजीपी) हुन नपाएर राजीनामा दिएका थिए।यस्तै कम्प्युरटर निर्देशनालयकी शीला कंसाकारले घरायसी कारण देखाउँदै जागिर छाडेकी हुन्।
Previous अब बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग म्यानपावरले यसकारण नगद लिन नपाउने
Next बारम्बार ऐठन भएर हैरान हुनुहुन्छ ? सिरानीमूनि राख्नुहोस् यी ९ चीज